Zvemagariro Media SeCrisis Management Tool | Martech Zone
Chitatu, June 12, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Takanga tiri pamberi penguva yedu! Anenge makore mashanu apfuura, ini ndakabatana naAdam Mudiki uye isu takavaka inotonhorera mavara ekuzivisa kusangana neWordPress. Tariro yedu yaive yekuti vatarisiri vematambudziko vatenge mukati uye voshandisa iyo… kutumira machenjedzo uye kutyaira vanhu kudzokera kunzvimbo yekuraira yakavakirwa paWordPress kuti vabudise ruzivo rwavo. Makore mashanu gare gare uye zvinoita sekutonga kwedambudziko vanhu vava kuzopedzisira votora vezvenhau kuti vabudise izwi!
Kuti usvike kune vateereri vakapamhama nekukurumidza sezvazvinogona, vamiriri vehurumende, vasiri purofiti, makambani nevamwe vari kutendeukira kune vezvenhau kuti vagadzirise dambudziko.
Nyatso kukoshesa izvi zvakadzikama, zvinofungisisa infographic kubva kuEmergency Management Degree saiti iyo inopa gwara uye nzwisiso yemashandisirwo enhau enhau senzira yekugadzirisa dambudziko.
Tags: corporationsdambudzikodambudziko rekutongamasangano ehurumendezvisingabatsiri